Achit University – Love & News
1 သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်2မွေးစားတဲ့မမကြီ3းကြာကူလီ4ခရီးသည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုပ်တူနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်(ရုပ်သံ)5ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီး တူတောင်ဖမ်းလို့မမိတဲ့ Thor ရဲ့ video လေး
ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်ထက် ပြည်သူကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ခင်သဇင်
မောင်နဲ့ ကျမက ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်အနေအထားပေါ့…. ငြင်းဆန်နေလို့လဲ ဘာမှထူးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်…. ကျမရဲ့ တကိုယ်လုံးဟာလည်း ရမက်သွေးတွေနဲ့ ပေါက်ထွက်လုမတတ် ဖြစ်နေရတာကတကြောင်း သူကလည်း စလာပြီမို့ ကျမလည်း တွန့်ဆုတ်မနေတော့ဘဲ သူ့လီးကြီးရဲ့ ဒစ်ကို ငုံပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။...
ပန်းနုရောင်ပြေးနေသောဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဖနောင့်လေးကိုအသာအယာကြွ၍ သွယ်လျှသောသလုံးသားလေးကိုည င်သာစွာ မြှောက်ကြွကာနောက်ထ ပ်...
အပြစ်ရှိသလိုတော့ ခံစားရတယ်........။ ခက်တာက စော်ကြီးကိုလည်း သနားတယ်..................... တကယ့် အကိတ်ကြီးဗျာ........။ သူနဲ့ ကျနော်တို့ကလည်း အရွယ်ချင်းက သိပ်မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့ ပိုပြီး ပြစ်မှားမိတာပေါ့.....။ အဲဒီအကျိုးဆက်က နောက့်နေ့တွေ မနက်ခင်းပိုင်း အတန်းပျက်တော့တာဘဲ............. တပါတ်ကျေ်သွားတော့......... သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းသုံးရက်...
တကယ်ကို အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်…တူတာကလဲ တစ်ယောက်ထဲလားကို မှတ်ယူရပါတယ်… … ။ အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံမှာ Grab ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ရုပ်နဲ့ တစ်ထေရာတည်းတူနေတဲ့ ခရီးသွား ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် …. ။...
The Mighty Thor, Odin’s Son ဆိုပြီးတော့ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ လေးစားစရာအသွင်နဲ့ အားကိုးချင်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ Thor ကိုကြွေတဲ့ပရိသတ်တွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အများကြီးရှိနေတာပါ။ Thor ဟာ MCU မှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ character တစ်ခုဖြစ်သလို...
“တို့လယ်တော….” “မောင်ညို…..ဟေ့ မောင်ညို…” “ဗျာ….အစ်မ. လာပြီး” “အေး….လယ်ထဲမှာ မျိုးစပါးခင်း သွားစောင့်ချေဟယ် ” “အင်း…အစ်မ ကျနော် ထမင်းဘူးပါ ယူသွားရမလား” “အေးလေဟယ် နင်တစ်နေကုန် နေရမှာ နွားသိမ်းချိန်ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့နော်” အစ်မအေး ထုပ်ပေးတဲ့...
စော်ရှာတဲ့အခါ...ညီလေးတို့သိထားရမှာက _ ပိုက်ဆံမရှိပေမယ့် တကယ်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်စော်လေးတွေfbသုံးတဲ့အခါ....tik tokလိုဟာလေးတွေဆော့တယ်။...ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးpostလေးတွေတင်တယ်။သူတို့က..အခုမှonlineဆိုတာကြီးကိုလက်တည့်စမ်းခွင့်ရတာကိုး။ ...... ပိုက်ဆံလည်းရှိတယ်...သန့်လည်းသန့်တဲ့စော်တွေကျတော့...သူတို့မျက်နှာတောင်သူတို့သိပ်မတင်ဘူး...ဘေးတံစောင်းပုံလေးတွေ...နောက်ကျောကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေစသည်ဖြင့်...အမှတ်တရပုံလေးတွေတင်တယ်။...fbပေါ်feelတာတွေဘာတွေလည်းသိပ်မတွေ့ရဘူး။.. ပိုက်ဆံရှိတဲ့မိဘတွေက..သူတို့သားသမီးကိုမတော်တရော်နဲ့တွေ့သွားမှာဆိုးတော့...အမြဲcheckနေတာ....။ ...ပိုက်စံရှိတယ်...ရူပါမသန့်တဲ့စော်တွေက...အစားအသောက်ပုံတွေတင်တယ်။....သူတို့ကနည်းနည်းfeelတယ်...မျက်နှာပုံသိပ်မတင်ဘူး။ စကားပြောယဉ်ကျေးတယ်။ ... အေး..ပိုက်စံလည်းမရှိဘူး..စောက်ခွက်ကလည်း..ဒစ်လည်နေတဲ့ဖေလိုးမတွေကျတော့...ဘာလုပ်သိလား.... ဖာသယ်မကြီးလိုဈေးဗန်းတွေခင်းမယ်။ ချီးပါတာကအစဓာတ်ပုံရိုက်တင်မယ်... အချိန်ပြည့်feelမယ်။ သူလ်ုဘဝတူ...ဖေလိုးမလေးတွေနဲ့...တရုန်းရုန်း... စပတွေ..လီးတွေ...ပါးစပ်ကမချဘူး... Online shopလုပ်မယ်။ (တကယ်စီးပွားရှာနေတဲ့သူကိုမဆိုလိုပါ)...
အင့် အမေ့ ကျွတ် ကျွတ် “နာလိုက်တာ မောင်ရယ် မောင့်ဟာကြီးက ကြီးလိုက်တာကွယ် ” ဒေါ်ချိုချိုသွယ် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မောင်နှင့်တွေ့ဆုံချိန်တိုင်း သူမအမြဲတစေ ဒီလိုပဲ ပြောပြောနေရသည်။ မောင့်ဒုတ်က ကြီးလွန်းလှသည်။ သူမအနေနှင့် အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်...
တစ်ချက်ထဲနဲ့ တသက်စွဲပြီ ရှင့်
ကျော်ဌေးနှင့် သီတာတို့ လင်မယားမှာ အရင်ကလို တကျက်ကျက် စကားများရန်ဖြစ်ရုံပင်မကတော့။ သတ်ပုတ်ရိုက်နှက်သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သားသမီးမရှိတော့ တယောက်နှင့် တယောက် သိပ်ပြီး သံယောဇဉ်ထားကြပုံမရပေ။ သူတို့လင်မယား အိမ်ထောင်ကျတာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ တနှစ်လောက်ပဲ သောကကင်းကင်းဖြင့် နေခဲ့ရသည်။ တနှစ်ကျော်တော့...
အ ရူးတစ်ယာက် ရဲ့ လက်ထဲ မှာ စာအုပ် တစ်အုပ် ကိုင်ထားတာ တွေ့တော့ စိတ်ကျန်းမာရေး ဒေါက်တာ က မေးတယ်။ “လက်ထဲမှာ ဘာကိုင်ထား တာလဲ ကိုယ့်လူ” အရူး က ပြောတယ်...